Iindlela ezi-4 zokwenza ukuba isiCwangciso seVidiyo seNtlalontle siphumelele | Martech Zone
Iindlela ezi-4 zokwenza ukuba isiCwangciso seVidiyo seNtlalontle sibe yimpumelelo
NgoLwesine, Novemba 20, 2014 Douglas Karr
Sabelane nge-infographic enkulu kwifayile ye- ukuqala kwesikhokelo sevidiyo yentlalo, ngoku nantsi into enkulu infographic evela kwi-Media Octopus kwiingcebiso zokusebenzisa ividiyo yentengiso yakho.
Akuzange kubekho ixesha elingcono lokuba uphawu lutyalomali ekwenzeni nasasazeni umxholo obangela ukuba abantu bahleke ngokuvakalayo, bancwine ngolindelo okanye bazive iinwele ngasemva kwentamo yazo zimile. UOlly Smith, uMlawuli wezoRhwebo kwi-EMEA, Imithombo yeendaba engalawulekiyo
Nazi izikhombisi ezi-4 ezinkulu zokwenza eyakho qhinga ividiyo online:
Ukuqonda abaphulaphuli bakho -Ividiyo yakho inomdla, iyonwabisa kwaye ifundise ukubamba ingqalelo. Iprofayile yabaphulaphuli bakho ukuqinisekisa ukuba ubonelela ngesiqulatho abasifunayo.
Yenza umxholo - uza kubamba njani ingqalelo yabo? Benze babe neemvakalelo, babe nethemba, bonwabise, kwaye ubonise uphawu lwakho.
Lawula ulwabiwo -Ividiyo ayiloncedo kakhulu ukuba akukho mntu uza kuyibukela. Yabelana ngayo ngokwasentlalweni kwaye uyikhuthaze ukuze uqiniseke ukuba ufikelela kubaphulaphuli ekufuneka ubenzile. Yandisa ividiyo yakho ukuze ukhangele njengokuba!
Measure kunye nempumelelo yempawu -Uza kuyilinganisa njani impumelelo yevidiyo yakho? Ndiyathemba ukuba unefowuni yesenzo ekugqibeleni esikhomba kwiphepha lokufika apho unokulinganisa khona uguquko.
tags: IiVidiyo zeNtengisovidiyoividiyo yentlaloividiyo yentlalo yeshishinioctopus yemidiyaiqhinga lokuthengisa ividiyo
I-Tapfiliate: Ulawulo lokuThengisa oluThengiswayo
Lixesha lokuMisa ukuSasazwa okuSasazwayo kokuSasazwa kwe-SEO